Cristiano Ronaldo oo gaaray Magaalada Manchester… (Goorma ayuu kulankiisa koowaad u safan karaa Kooxdiisa Man United?) – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo gaaray Magaalada Manchester… (Goorma ayuu kulankiisa koowaad u safan karaa Kooxdiisa Man United?)
Ahmed Nur September 4, 2021
(Manchester) 04 Sebt 2021. Cristiano Ronaldo ayaa gaaray Magaalada Manchester ee dalka England, si uu ugu biiro Kooxda Manchester United oo uu u dhammaystiro ka soo dhaqaaqistiisa Juventus.
Weeraryahankan oo ka mid ah kuwa ugu fiican Adduunka ayaa ka ciyaari doona markale garoonka Old Trafford kaddib markii uu dib ugu soo laabtay Manchester United, isla markaana uu naadiga reer Talyaani uga soo dhaqaaqay 19.8 Milyan oo gini.
Ronaldo ayaa ka deggay garoonka Diyaaradaha Magaalada Manchester Jimcihii, Kooxda ayaana rajaynaysa inuu safashadiisii ugu horreeyey u sameeyo soo laabashadiisa kaddib kulanka ay garoonkooda ku soo dhoweynayaan Newcastle 11-ka bishaan September.
Waxa uu Ronaldo ka soo laabtay waajibaadka xulkiisa qaranka Portugal, isagoo labo gool oo uu dhammaadkii ciyaarta u dhaliyey 2-1 guul ah ay kaga qaateen Ireland, waxaana uu CR7 goolashaas kala dhaliyey 89-daqiiqo iyo 96-daqiiqo, kulankaasoo dhacay Arbacadii qeybna ka ahaa isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Labadaas goo loo uu dhaliyey Ronaldo ayuu kaga sare maray Ali Daei oo heystay rikoorka ninka ugu goolasha badan kulammada heerka caalami taariikhda, inkastoo uu 36-sano jir yahay haddana CR7 waxa uu qarankiisa u dhaliyey 111-gool, halka Ali Daei uu lahaa 109- gool.
Si kastaba ha noqotee, kaarkii jaallaha ahaa ee uu ku qaatay garoonka Estadio Algarve ayaa ka dhigtay inuu seegi doono kulanka ku soo aaddan xulkiisa, iyadoo macallinka qarankiisa ee Fernando Santos uu u ogolaaday inuu tago oo uu fasax siiyey.
Ronaldo xiddigii ay isku kooxda ahaan jireen oo hadda ah Agaasimaha farsamada Red Devils ee Darren Fletcher ayaa Weeraryahanka ku soo dhoweeyey qeybta qaaska ah ee garoonka diyaaradaha Manchester.
Saxiixan cusub ayaa xiddigaha Kooxdiisa kula biiri doona todobaadkan tababarka, waxaana uu iska soo xaadirin doonaa xerada tababarka Carrington, iskuna diyaarinaya inuu ka hoos ciyaaro Macallin Ole Gunnar Solskjaer, kaasoo ay iska garab ciyaareen intii lagu guda jiray waqtigii hore ee Ronaldo uu ku qaatay Man Utd intii u dhexeysay 2003 illaa 2009.
RASMI: Kooxda Manchester City oo shaacisay 25-ka ciyaaryahan ee uga qeyb-galaya Champions League… (Jack Grealish & Romeo Lavia oo ku jira)